ပင်မစာမျက်နှာ အာဖရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Ivory Coast ဘောလုံးကစားသမားများ က Nicolas Pepe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအဖြစ်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက် "Nico". ကျွန်ုပ်တို့၏က Nicolas Pepe ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေယနေ့အထိသည်သင်မှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်ဆောင်ခဲ့ရမည်။
ကလေးဘဝအချိန် မှစ. နေ့စွဲဖို့က Nicolas Pepe ကလေးဘဝ Story- ။ FutWiz မှအကြွေး
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကိုအားနည်းနေဥရောပထိပ်တန်းကလပ်အသင်းထားရှိမည်နှင့်ဒူးမှာတောင်းစားသောမိမိအအရည်အချင်းများသိတယ်။ သို့သော်ဘောလုံးပရိတ်သတ်တွေကသာလက်အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သည့်က Nicolas Pepe ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့စတင်ဖို့ကြကုန်အံ့။
က Nicolas Pepe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းဘဝနှင့်မိသားစုနောက်ခံ
က Nicolas Pepe မြောက်ဘက်-အလယ်ပိုင်းပြင်သစ်တွင်တည်ရှိသော Mantes-la-ဂျိုလီရပ်ရွာထဲတွင်သူ၏မိခင်မှမေလ 29 ၏ 1995th နေ့၌မွေးဖွားခဲ့ပြီး, ဖခင် Papa Celestin ခဲ့သည်။ အောက်တွင်သူ့မိဘများ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်; တစ်ဦးအလုပ်ကြိုးစားတဲ့အဖေနှင့်လှပသောမိခင်။
က Nicolas Pepe မိဘများ။ ခရက်ဒစ်မှ MondialSport
က Nicolas Pepe နှိမ့်ချစနှင့်ဆင်းရဲသောမိသားစုနောက်ခံကနေလာပါတယ်။ သူကပြင်သစ်တွင်မွေးဖွား, ဒါပေမယ့်သူ့မိဘပိုကောင်းလူနေမှုရှာအလယ်ပိုင်း 1990s အတွက်ပြင်သစ်မှအိုင်ဗရီကို့စ်ကနေရွှေ့ပြောင်းသူကိုအိုင်ဗရီကို့စ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသည်။ ခဲ့သော်လည်း
ပဲရစ်မှာ setting ပျေါက Nicolas Pepe ရဲ့မိဘများရရှိနိုင်အလုပ်အကိုင်များရှာခဲ့ရတယ်။ မိမိအ mum, တစ်အိမ်အကူကျန်ရစ်နေစဉ်သူ၏အဖေ Celestin တစ်ဦးအကျဉ်းထောင်မှ warder များ၏အလုပ်အကိုင်အတက်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က Nico မွေးဖွားနှင့် Mantes-la-ဂျိုလီရပ်ရွာထဲတွင်ထမြောက်စေတော်မူ။ မိမိအဖေဒေသအတွက်အလုပ်အကိုင်အချီအပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အပေါ်သူ၏အစောပိုင်းဘဝအတွက်က Nicolas Pepe ရဲ့မိဘများအနောက်ပိုင်းပြင်သစ်တွင် Poitiers မှပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
က Nicolas Pepe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ပညာတတ်ခြင်းနှင့်အလုပ်ရှာဖွေရေး Buildup
အရှေ့မြောက်ပဲရစ်မှာကြီးပြင်းခြင်းမရှိကစားစရာသို့မဟုတ်ဂိမ်းရှိခဲ့သည်။ က Nicolas သမျှသည်သူ၏ဘောလုံးဘောလုံးကန်ဖို့ပဲ။ သူကအမြဲသူ့ခြေရင်းနားမှာဘောလုံးကိုချစ်၏။ သူ6အသက်အခါကသူ၏ပညာရေး၏အဓိကမီးမောင်းထိုးပြလာ၏။ ဒါကသူ့ကိုမေးလျှင်အဘယ်သူသည်ကျောင်းတွင်မိမိဆရာနဲ့တှေ့ဆုံခဲ့ယခုအချိန်တွင်ခဲ့ ... "က Nicolas, သင်အသက်တာ၌အဘယ်သို့ပြုရမည်ချင်ပါသလဲ?"
က Nicolas Pepe ရဲ့ပညာရေးနှင့်အလုပ်ရှာဖွေရေး Buildup ။ theblacklistpub မှအကြွေး
က Nicolas replied; "ကျွန်မကြီးပြင်းလာသောအခါကျွန်မပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားဖြစ်ချင်"။ ဤသည်ဆုံးဖြတ်ချက် Nico ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခဲ့သည်ကိုသိနှင့်သူ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ဘယ်တော့မှအဘယ်သူသည်မိမိဆရာအံ့အားသင့်။ ထို့ကြောင့်သူကငယ်ကောင်လေးကကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
အဆိုပါ 1998 ကမ္ဘာ့ဖလားမှာပြင်သစ်ရဲ့အောင်မြင်မှု၏ပါတီအားဘောလုံးကွင်းထဲမှာပါဝင်အာဖရိကရွှေ့ပြောင်းကြီးမားတဲ့မဲပေးသူကိုမြင်တော်မူ၏။ က Nicolas တစ်ခုချွင်းချက်မရဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည်မိမိအပညာရေးနှင့်အတူသွားနှင့်သူ၏အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သည်အထိဘောလုံးနှင့်အတူကရောပေမယ့်။ Nico 5-9 နှစ်ပေါင်းအသက်င်ဘို့မဆိုအကယ်ဒမီ၏ထုတ်ကုန်ဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။
က Nicolas Pepe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးဘဝ
က Nicolas သူ့ကိုစမ်းသပ်မှုတွေဖြတ်သန်းနှင့် (ယခု Stade Poitevin အဖြစ်လူသိများ) ပြင်သစ်ဒေသခံကလပ်, Poitiers FC အသင်းနှင့်အတူစာရင်းသွင်းကိုမြင်လျှင်ဘောလုံးအဘို့စိတ်အားထက်သန်မှုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဲဒီအခြိနျမှာကလပ်ရဲ့အကြီးတန်းအဖွဲ့ကပြင်သစ်ပဉ္စမဆင့်လိဂ်များတွင်ကစားခဲ့။
က Nicolas Pepe ရဲ့အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးနှစ်။ ဝစ္စ-ပြင်သစ်မှ credit ။
ကြမ်းတမ်း Start ကို:
ကလပ်ပူးပေါင်းပေါ်၌လူတိုင်းဘောလုံးကိုအပေါ်သူ၏စွမ်းရည်နှင့်အတူလွဖြစ်လာခဲ့သည်။ လူငယ်အဆငျ့မှာမိမိအထင်ကြီးဖျော်ဖြေပွဲနေသော်လည်းပိုကြီးအကယ်ဒမီမှဘောလုံးကင်းထောက်က Nicolas Pepe ရဲ့ rangy ကောင်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သူ၏သဘောထားကိုစိုးရိမ်သဖြင့် deterred ဖြစ်လာခဲ့သည်။ က Nicolas ကိုက်ညီမှုဖြစ်ခဲ့သည်သို့မဟုတ်သူအချို့အခြေအနေများတွင်ပျင်းရိခဲ့ကွောငျးအတှေးအရှိခဲ့သည်။ ကြောင့်ဤအချက်ကိုရန်, အဘယ်သူမျှမချဉ်းကပ်သို့မဟုတ်သူ့ကိုတန်ဖိုးထား။
ဘောလုံးကင်းထောက်နှင့်အခြားရှာဖွေစုဆောင်းဖော်ပြသံသယများကြားမှ, Pepe သူလိုခငျြသောအရာကိုသိသည်။ သူ Poitiers ပထမဦးဆုံးအသင်းအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်လာသည်အဖြစ်သူနောက်မှပြန်သည်သူ၏ပုံစံကိုရတယ်။
က Nicolas Pepe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame ပုံပြင်မှလမ်း
သူ Poitiers အဆိုပါ 3-1 ရာသီအတွက်တန်းဆင်းမှသူတို့ကိုနှမြောသောကြောင့်ဖြစ်သော 2012-2013 အနိုင်ရရှိ secure ကူညီဆာပဖြစ်သကဲ့သို့က Nicolas Pepe ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအောင်မြင်မှုသူ့ကိုအမျက်ဒေါသ, အနောကျပိုငျးပြင်သစ်တွင်တည်ရှိသောဘောလုံးကလပ်နှင့်အတူကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုရတယ်။
ဤသည်က Nicolas Pepe ၏အောင်မြင်မှုဖို့အလှညျ့အပွောငျးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးဟာအလွန်လှပသောနေ့၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ အဆိုအရ BleacherReportsဒါကြောင့်သူကကစားမယ့်ပွဲစဉ်တက်ရောက်စဉ်အားကစားဒါရိုက်တာလူး Campos က Nicolas ပြောက်နေ့ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
Fame Story- ဖို့က Nicolas Pepe လမ်းမကြီးသူတွေ့ရှိခဲ့တယ်အဆိုပါနေ့က။ Fieldoo မှအကြွေး
ယခင်ရီးရဲလ်ကင်းထောက်တစ်ဦးပြိုင်ဘက်အသင်းမှရဲ့ကစားသမားမှာကြည့်ဖို့ရှိခဲ့ပေမယ့်။ သို့သော်သူ Pepe မြင်ဘူးသောအခိုက်အထဲကနေသူကင်းထောက်ဆီသို့ရောက် လာ. , အဘယ်သူကိုမျှမကအခြားဘောလုံးကစားသမားမဟုတ်ဘဲပင်သည်သူ၏ပစ်မှတ်များအတွက်မျက်စိရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤ "မြင်မြင်ချင်းချစ်မိသည်" Pepe တစ်တောက်ပ 82nd မိနစ်ထိပ်တန်း equalizer သွင်းယူသည့်အခါနောက်ထပ်ခိုင်ခံ့စေ၏။
"ငါသည်အလျင်အမြန်, သူနှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲကျ" Campos အင်တာဗျူးတွင်ပြင်သစ်ဘောလုံးက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုပြောသည်။ Pepe ၏အလုံအလောက်မြင်ပြီးနောက်သူသည်အဘိဓါန်ပွငျသစျအိုင်ဗရီကို့စ်ကြယ်ဝယ်ယူရန်လိုင်လီပိုင်ရှင်အသစ်ပြောပြရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
က Nicolas Pepe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- Fame ပုံပြင်မှထလော့
က Nicolas Pepe Orleans နဲ့ချေးငွေစာလုံးပေါင်းပြီးနောက်ဇွန်လ 21 ၏ 2017st အပေါ်လိုင်လီဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ကလပ်ပူးပေါင်း့လအနည်းငယ်သူဟာကလပ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကအကြီးအကျယ်ပြန်လည်နုပျိုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ချိုးအပေါ်သူ၏ရှိန်ပြင်းထန်တဲ့နေ့တွေမှာအရှိန်အဟုန်ဥရောပအတွက်အဆိုးရွားဆုံးတန်ပြန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အသင်းတွေထဲကတစ်ခုထဲသို့လိုင်လီလှည့်။
အဖြစ်ကောင်းစွာသည်သူ၏လှပသောရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အဖြစ်, Pepe ရဲ့စာရင်းဇယားများသူကိုလည်းဥရောပတိုက်ကြီးပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးရည်မှန်းချက်ဖန်တီးသူတွေထဲကကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲ, ကကတည်းကပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါသည် ဧဒင်ဥယျာဉ်ဇက် လိုင်လီကမ္ဘာကြီးကိုဘောလုံးအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေထဲကမှပြောဆိုချက်ကိုချနိုင်ကြောင်း 2012 အတွက်ချယ်လ်ဆီးထွက်ခွာသည်။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
က Nicolas Pepe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- relationship ဘဝ
ကျော်ကြားမှုမှ Nico ရဲ့မြင့်တက်မှုနှင့်အတူလူတိုင်းရဲ့နှုတ်ခမ်းအပေါ်မေးခွန်းကသူ့ရည်းစားသို့မဟုတ်ဖျားခါသူကားအဘယ်သူ ... ဖြစ်ပါတယ် ?. အဘယ်သူမျှမ Nico ကသူ၏ချောမောကြည့်အပါအဝင်အရည်အသွေးတွေ endearing ထားပြီးမင်းသမီးသူ့ကိုတစ် Darling စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်စေခြင်းငှါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုငြင်းပယ်ရှိပါသည်။
က Nicolas Pepe ရဲ့ Girlfriend သူကားအဘယ်သူ ?. ခရက်ဒစ်မှ Ghanasoccernet ရေဒီယို
သို့သော် Nico ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေဝှက်ထားသောအချစ်သီချင်းသူ့မေတ္တာဘဝပုဂ္ဂလိကနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ဒရာမာ-အခမဲ့ရိုးရှင်းစွာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အများပြည်သူမျက်စိများ၏စိစစ်လှရာတစျခုဖွစျသညျ။ စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်, က Nicolas သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့ပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့ပါသည်နှင့်သူ၏ပုဂ္ဂလိကဘဝအပေါ်မည်သည့်မီးမောင်းထိုးရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။
က Nicolas Pepe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
က Nicolas Pepe ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝဖြစ်ရပ်မှန်များကိုသိရန်ရယူခြင်းသငျသညျအထံတော်၌ပြည့်စုံရုပ်ပုံ get ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
ချွတ်စတင်ခြင်းသူတစ်ဦးအမြန်-witted ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်။ Pepe, လူပေါင်းကောင်းသောဆက်သွယ်မှုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူပျော်စရာရှိသည်ဖို့အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သူကအလေးအနက်နှင့်စဉ်းစားဟန်ရရှိသွားတဲ့ကြိမ်ရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကား, မိမိအနာဂတ်အပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ပါဘူးသောအခါအအချိန်လေးဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကသူ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝအပေါ်, Pepe အရာအားလုံးတို့အတွက်လုံလောက်သောအချိန်မရှိတဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ခံစားမှုနှင့်အတူတစ်စုံတစ်ယောက်သည်။
က Nicolas Pepe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- မိသားစုဘဝ
Nico ရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ကသူ့ဂရုစိုက်တတ်တဲ့မိဘများနှင့်မိသားစုဝင်များသည်။ သူ၏အဖေဥပမာ, မိမိသားအဘို့ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်အာမခံချက်မှအရာအားလုံးကိုယဇ်ပူဇော်ကြ၏။
က Nicolas Pepe နှင့်သူ၏အဖေက။ ခရက်ဒစ်မှ MondialSport
မင်းသိလား?… က Nicolas '' အဖေ, Celestine Pepe တစ်ချိန်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်လာဖို့စီမံခန့်ခွဲမရသူတစ်ဦးဘောလုံးသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ Papa Celestin သူ့သားက Nicolas မှတဆင့် proxy ကိုတစ်ဦးဘောလုံးသမားဖြစ်လာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဤသည်ကိုသူတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိသည်ဖို့ကသူ့ကလေးလေးများအတွက်ဘေးဖယ်သည်သူ၏ထောင်မှကြီးကြပ်ရေးမှူးအလုပ်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Celestin အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်လေ့ကျင့်ရေးအတှကျသူ့သားနှင့်အတူလိုက်ပါဖို့အချိန်အထဲကယူခဲ့ပါတယ်။ သူအဖြစ်ဝေးမိမိသားကိုမှအနီးကပ်နေထိုင်ရန်အလို့ငှာတစ်ဦးဘောလုံးပညာပေးအဖြစ်လိုင်စင်ရတဲ့အဖြစ်သွားလေ၏။
ယနေ့က Nicolas Pepe ရဲ့မိဘတွေကမိသားစုထဲမှာသူ့ကိုရှိခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများရိတ်ရှိနေခြင်းမှာရှိပါတယ်။ မိမိအလူမှုမီဒီယာအကောင့်အဆိုအရသူသည်မိမိမိခင်နှငျ့ဆကျဆံရေးကောငျးရှိသည်ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။
က Nicolas Pepe နှင့်သူ၏မိခင်။ IG မှအကြွေး
Pepe သူ့မိဘနှင့်အတူတစ်ဦးတည်းကိုတက်မကြီးထွားခဲ့ပါဘူး။ ထို့အပြင်သူသည်မွေးချင်းမောင်နှမ (အဘယ်သူကိုများထဲမှ Kwame Pepe ဖြစ်ပါသည်) နှင့်အခြားနီးစပ်မိသားစုဝင်များရှိပါတယ်။ Pepe ရဲ့ သူ့မိဘအဆင်ပြေဖြစ်ကြပြီးအကြောင်းအရာအက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်အားမိမိကတိကဝတ်ဆင်တူသည်သေချာအောင်ဖို့ဆည်းကပ်။
က Nicolas Pepe, သူ့မိခင်နှင့်မောင်နှမ။ IG မှအကြွေး
က Nicolas Pepe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်အလက်
အဆိုအရ TransferMarket, က Nicolas Pepe လက်ရှိစျေးကွက် 36 သန်းယူရိုတန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မျက်နှာဧကန်အမှန်သူ့ကိုသန်းကြွယ်သူဌေးဘောလုံးသမားစေသည်။ ဤအချက်ကို, သို့သော်, တစ်ဦးအလွန်အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေလူနေမှုပုံစံစတဲ့စလုပ်ဆောင်ရမှာတွေမပေးပါဘူး။
က Nicolas Pepe သည်သူ၏ဘောလုံး Moni စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စမတ်သည်။ ဤသည်အရူးနဲ့တူဖြုန်း, ဒါမှမဟုတ်သူ၏ဘဝပုံစံကိုပြောင်းလဲမပေးကိုဆိုလိုသည်။
က Nicolas Pepe ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်အလက်နဲ့။ IG မှအကြွေး
က Nicolas Pepe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- မရေမတွက်အချက်အလက်
က Nicolas Pepe အဘယ်အရာကိုဘာသာတရားဖြစ်သနည်း က Nicolas မွတ်စလင်ဘောလုံးသမား, စတိုင်၌သူ၏ဘာသာတရားကိုတခုအဖြစ်မှချစ်သောသူတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူကအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာဒူဘိုင်းသဲကန္တာရသွားရောက်လည်ပတ်၏ဝါသနာဖြစ်ပါတယ်။
က Nicolas Pepe ရဲ့ကသူ၏မွတ်စ်လင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပြသ။ IG မှအကြွေး
သူချင်းအတူ Pepe ရဲ့ On-စေးကြားဆက်ဆံရေးသည်ယောနသန် Bamba နှင့်ယောနသန် Ikone "ဟုသုံးသည့်အမည်ပြောင်ရရှိထားပြီးပါပြီ attackersBip Bip"။ မင်းသိလား?… ဤသည်အမည်ပြောင်ဟာ Looney Tune ကာတွန်းစီးရီးကနေလမ်းမကြီး Runner များအတွက်ပြင်သစ်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Bip Bip partners- က Nicolas Pepe ရဲ့အကောင်းဆုံး-ဒီကဗျာ
Nico တောင်ပံကနေ operating ကိုပိုမိုနှစ်သက်မယ့်အစားများ၏ဗဟိုတိုက်စစ်မှူးများ၏ကျွမ်းတဝင်မရှိသောအခန်းကဏ္ဍနည်းပြများကသူ့ကိုပေးပါ။
က Nicolas Pepe ရဲ့ Facts- သူ့အကျွမ်းတဝင်အခန်းက္ပ။ ခရက်ဒစ်မှ 90Min
က Nicolas Pepe ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Facts- ဗီဒီယိုကိုအကျဉ်းချုပ်
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်တော်တို့ရဲ့က Nicolas Pepe ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBogger, ကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်မှန်မကြည့်ဘူးသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေပါလျှင်အောက်တွင်မှတ်ချက်ခွငျးအားဖွငျ့အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပါ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါလိမ့်မယ်။